Umlando omusha wezimpawu zesizwe seNingizimu Afrika
Ngemuva kokukhethwa kwentando yeningi yokuqala ngo-1994, i-National Symbols Commission yathatha umthwalo wokubuza umphakathi waseNingizimu Afrika lokho okumele kubonakale kubonakala khona kubumbano lukazwelonke.
Abantu abaningi baseNingizimu Afrika abavela kuzo zonke izici zokuphila babenokusho kwabo kulokho okwakuyoba yizwi eliqhoshayo, ukubonakala okubonakalayo nokusayina kwezwe lethu.
Ifulegi kazwelonke, elaqala ukusetshenziswa ngo-27 Ephreli 1994, laklanywa nguMnu Fred Brownell, owayengumNumzane waseHulumeni waseNingizimu Afrika....more
Isikhathi Sesikhathi Sesizwe
Abantu baseNingizimu Afrika abavamile bahlanganyela ekubonisaneni umphakathi ukuze benze futhi baqede imiklamo yeZimpawu Zethu Zesizwe....more
Isiphandla sezikhali sesiFundazwe
Ingubo yezikhali ichazwa, eMthethweni We-Heraldry No. 18 ka-1962 waseNingizimu Afrika, njengalokhu into noma isibalo sibe umfanekiso ofanekisela imibala ngesihlangu ngokuhambisana nemigomo nemithetho ye-Heraldry, noma ngaphandle komqhele, isigqoko, isikhu...more
I-South Africa Coat of Arms ichazwe
Isigqoko sezikhali kukhona isibonakaliso sombuso futhi sibonakaliso esibukeka kakhulu sezwe lethu....more
I-springbok ithola igama layo kusukela kwisenzo sokubiza (ukugqama ukubonisa) okufana nalokhu ku-antelope....more
Umlando Wengoma yezwe yaseNingizimu Afrika
Ngokwesigaba 4 soMthethosisekelo omusha waseNingizimu Afrika, esasayinwe emthethweni eSharpeville ngoDisemba 10, 1996, inguqulo efinyelelekile nehlangene yeNkosi Sikelel 'iAfrica ne-Die Stem van Suid Afrika manje ingoma yesizwe eNingizimu Afrika. Njengoba...more
Ngesilinganiso ngasinye, kubonisa ubunye phakathi kwemicabango nezenzo zomuntu. Ngezinga elihlangene, kubonisa ukuthi njengesizwe kufanele sibe munye kanye nomqondo wokuziqhenya kanye nokuziqhenya kwezwe....more
Uma iNingizimu Afrika ingumuntu, ijazi lezikhali lizolingana nesignesha. Isigqoko sezikhali sibonisa isitembu esisemthethweni noma uphawu ezincwadini zomthetho...more